अध्ययनवाट खुल्यो यस्तो निष्कर्ष ‘हावामा ३० मिनेट सम्म बाँच्ने कोरोना साढे ४ मिटर टाढासम्म फैलन्छ’ – Online Nepal
अध्ययनवाट खुल्यो यस्तो निष्कर्ष ‘हावामा ३० मिनेट सम्म बाँच्ने कोरोना साढे ४ मिटर टाढासम्म फैलन्छ’
March 11, 2020 189
एजेन्सी । चीनको वुहान क्षेत्रवाट सुरु भएको कोरोनाको सं क्र मण नि यन्त्र ण गर्न चीनले आफ्नो सबै शक्ति लगायो । अहिले चीनमा कोरोना नि यन्त्र णको क्रममा छ । नयाँ रोगको नि य न्त्रण मात्र होइन चीनले कोरोना भाइरसको विषयमा पनि अध्ययन गरेको छ । चीनमा गरिएको सरकारी अध्ययनले कोरोना भाइरस हावामा ३० मिनेटसम्म बाँच्ने तथ्य खुलेको छ ।
चीन सरकारको म हा मा री विज्ञको समूहले गरेको नयाँ अध्ययनमा कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ हावामा ३० मिनेटसम्म बाँच्ने र यस भाइरस साढे ४ मिटर टाढा सम्म फैलन सक्ने देखिएको हो । सो समाचार चीनको समाचार संस्था साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ ।
जमिनमा रहेको कोरोना भाइरस एक दिन सम्म पनि बाँच्न सक्छ । कोरोना सं क्र मि त व्यक्तिले छोएको बस्तुहरुमार उसको शरीरबाट निस्कने ¥यालजन्य पदार्थबाट कोरोना सं क्र मण को जोखिम हुने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
जमिनको तापक्रमले कोरोना भाइरस कति दिन सम्म बाँच्न सक्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । ३७ डिग्री सेल्सियस अथवा ९८ फरेनहाइटको तापक्रममा कोरोना भाइरस दुईदेखि तीन दिनसम्म बाँच्न सक्ने देखिएको छ ।
गिलास, कपडा, फलाम, प्लास्टिक र कागजमा कोरोना भाइरस दुई तीन दिन सम्म पनि बाँच्ने बताइएको छ। कोरोना सबैभन्दा बढी फैलिएको हुनान प्रान्तमा गरिएको अध्ययनमा यस्तो देखिएपछि सो कुरा सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त अनुसन्धानमा गत जनवरी २२ मा एक व्यक्तिबाट कसरी कोरोनाको सं क्रम ण भयो भन्नेबारे पनि उल्लेख छ।
निश्कर्षमा अनुसन्धानकर्ताले साढे ४ मिटरसम्म कोरोनाको सं क्रम ण देखिने बताएका छन्। चार घण्टाको अवधिमा कोरोना सं क्र मि त ती व्यक्तिले बसमा चढेका ४८ मध्ये कैयौंलाई कोरोनाको सं क्र म ण सारेका थिए। अनुसन्धानकर्ताले कोरोनावाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि लेखेका छन् । जसमा माक्स र पञ्जालाई अनिवार्य प्रयोग गर्न भनिएको छ ।
Prevकोरोनालाई प’राजित गर्दै चीन : सामान्य बन्दै जनजीवन, विद्यालय खुल्न थाले
Nextमोटरसाइकल दाइजो नपाएपछि विवाहकै दिन बेहुला भगाइयो, चर्को व्याजमा लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्दै वेहुली पक्ष चिन्तामा
परिवारनै अस्पताल भएको बेला घरमा एक्लै रहेकी जयालाइ अचानक के भयो ?
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय १ पुगेपनि निको भएर घर जानेको संख्या ३० पुग्यो, आज ८ जना डिस्चार्ज हुँदै
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (60400)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (35888)